Taliyaha Booliska oo shaaca ka qaaday in la bilaabay baaritaan lagu ogaanayo ciddii dishay… – Hagaag.com
Taliyaha Booliska oo shaaca ka qaaday in la bilaabay baaritaan lagu ogaanayo ciddii dishay…
Posted on 21 Nofeembar 2019 by Admin in National // 0 Comments
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in la bilaabay baaritaan lagu xaqiijinayo ciddii ka mas’uulka ahayd dilkii Almas Elman ee shalay galab loogu gaystay Magaalada Muqdisho.
General Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar) ayaa sheegay in uu doonayo in shacabka Soomaaliyeed uu la wadaago dhacdadii ka dhacday Magaalada Muqdisho oo sida uu sheegay ay ku geeriyootay Almas Elman, oo qiimo weyn ugu fadhiday buu yiri dadka Soomaaliyeed.
Taliyaha ayaa shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskii, qaraabadii iyo asxaabtii ay ka baxday Almas Elman uga tacsiyadeeyay geerida ku timid.
Dhanka kale Taliyaha Ciidanka Booliska ayaa wuxuu sheegay in Laanta Dembi Baarista ee CID ay furtay gal dacwadeed lagu baarayo dilkan, isagoo intaa ku daraya in Saraakiil aqoon u leh dilalka ceynkani oo kala ah ay baaritaanka ka qayb qaadanayan.
General Xijaar ayaa wuxuu ka dhawaajiyay in wixii ka soo baxa baaritaankan ay la wadaagi doonaan dadka Soomaaliyeed, dal iyo dibadba.
Dhinaca kale Siyaasiyiinta Madasha Xisbiyada Qaran ayaa waxay Dowladda Somalia ugu yeereen inay si sax ah u baarto dilkii shalay galab Almas Elman loogu gaystay Magaalada Muqdisho.
Gabadhan ayaa waxaa lagu dhex dilay Xerada Xalane, xilli ay ku sii jeeday Garoonka Aadan Cadde, iyadoo markaasi safar ugu amba bixi laheyd Magaalada Nairobi ee Xarunta Kenya.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa isagoo ku hadlaya afka Madasha Xisbiyada Qaran wuxuu sheegay in Madasha ay dowladda ka dalbanayso baaritaan buuxo oo lagu sameeyo dilka gabadhaasi.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in goobta gabadha lagu dilay ay tahay meel aad loo ilaaliyo, isla-markaana aysan suurtagal ahayn in dad lagu dilo, iyadoo aan la garanayn ciddii dishay.
Xildhibaan Fiqi ayaa wuxuu ka digay in baaritaankan uu noqdo mid lamid ah baaritaankii lagu sameeyay qaraxii ka dhacay Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar, kaasoo aan wax natiijo ah laga soo saarin.
Dowladda Somalia ayaa cambaareysay dilka Almas Elman.